भारतको अर्थव्यवस्था पहिलेदेखि नै मन्दीको मार झेलिरहेको छ। त्यसमाथि कोरोना महामारीले बेरोजगारी र गरिबीको आगोमा पेट्रोल थपिदिएको छ। यस संकटको घडीमा देशलाई मनभेद र घृणा होइन, सकारात्मकता र एकता आवश्यक छन्।
रविश कुमार (प्यारोडी)
देशमा सकारात्मकता र एकताको वातावरण ‘ल्यापडग’ मिडियाले बनाउन दिए पो ! कोरोनामा समेत धर्म भेटेका छन्। गरिब, मजदुरको हालत खराब छ। एक छाक खान पाएका छैनन्।
एउटा बहुतै पुरानो सोभियतकालीन जोकः
‘समाजवाद’को गाडी ‘साम्यवाद’ शहरसम्म पुग्नै सक्दैन। किनकि, सबै शक्ति हर्न बजाउँदै सकिन्छ।
झलक सुवेदी एट मकैखोले
यो जोकमा एउटा समस्या छ के ब्रोसिसहरू ! हाम्रोमा समाजवाद मात्र हैन, साम्यवाद पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनमा पास गरेपछि स्वतः आउँछ। हेरिराखौँ।
खरदारदेखि जागिर थालेर सचिव हुञ्जेल चानचुन ४० वर्ष सरकारी सेवामा बिताउँदा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्ने, मिलेसम्म तानतुन पारेर, नमिले घप्ला मारेर खाने अनि अवकाशपछि देश किन बनेन भनेर धारावाहिक लेख्नेहरूलाई सरकारले देवघाट जाने बेला पनि नियुक्ति दिने कुराले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन्।
देश किन बनेन भनेर यिनीहरूले लेख्नु स्वाभाविक हो। देश के–के कारणले नबनेको यिनीहरूलाई जति अरूलाई थाहा हुन्न। किनकि, देश बन्न नदिनुमा यिनीहरूकै बढी योगदान छ।
इन्स्पेक्टर औषधि किन्ने महिलालाई निर्घात कुट्ने, डीआईजी प्रहरीलाई उत्तेजित नगरूँ भन्दै कुट्नेको बचाउ गर्ने ! प्रहरीप्रमुख मूक दर्शक, गुहमन्त्री बादल सत्ताको नशामा लट्ठ, प्रेम ओली नीति उपदेशमा मग्न ! नागरिक कुटिऊन्, कसैलाई मतलब नाइँ ! निरंकुश ओलीतन्त्र झनै निरंकुशतातिर, हैट् !
प्रकाश अधिकारी ओखलढुंगे
संकटमा अलि–अलि निरंकुश हुनुपर्छ। अलि निरंकुश भएर चाइनाले कोरोना भगायो।